Serivisy - HSR Prototype Co., Ltd.
Fanamboarana vy vita amin'ny vy
Fitsipiky ny fandroahana
ABS & ABS-tahaka
PC & PC-tahaka
PMMA & PMMA-tahaka
Orinasa Serivisy Prototyping Rapid tsara indrindra
HSR Prototype Limited dia manome serivisy fijanonana tokana hahatratrarana ny prototyping haingana an'i Shina sy ny filan'ny famokarana ambany. Manana fomba fanahafana prototyping isan-karazany isika:
Fanontana SLA / 3D
Tian'ireo mpanjifa manerantany ny serivisy haingananay China Rapid Prototyping. Faly izahay manampy ny mpanjifanay hanangana ny anjarany ary hanamarina ny endrika.
Fanadihadiana sy fanohanana matihanina
Ny ekipan'ny injenierantsika dia misy matihanina nahita fianarana tsara, miaraka amina sehatry ny famokarana. Ny ankamaroan'ny injenieranay dia manana traikefa 10 taona mahery. Rehefa mahazo ny fangatahanao sy ny fisie 3D CAD izahay, dia hodinihinay tsara ny faritra tsirairay avy aminao ary hizahanay ny fahaizan'izy ireo ampiasaina. Miorina amin'ny fahalalantsika sy ny zavatra niainantsika, dia hanampy anao amin'ny fisafidianana ny fomba prototype tsara indrindra hahatratra ny zavatra antenainao amin'ny kalitao sy ny filanao teti-bola.
Dupoint, Bayer, BASF, Sabic ary koa agents agents materialy dia mpiara-miasa maharitra efa niarahanay niasa, afaka manome COC (Certificate of Conformity) izahay ary koa tatitra RoHS hanehoana porofo sy antoka fa tena izy resina no ampiasaina.
Ny resins izay matetika ampiasaintsika: ABS, PP, PC, PC + ABS, PA, PA + GF, POM, PMMA, TPE.
Ankoatr'izay, azonao atao ny misafidy ny resin mety mifototra amin'ny fananan'ny fitaovana, ny ankamaroan'ny resins dia azo alaina amin'ny faran'ny anay.
Ny fandeferana ankapobeny ampiharinay amin'ny faritra misy tsindrona dia ny DIN 16901. Raha mila fandeferana henjana kokoa ianao dia mamporisika anao hatrany izahay mba hampisehoinao tsara izany eo am-panaovana fitanisa ary koa fantaro aloha ny refy mitsikera sy ny fivoriana. Ny fitaovam-tsindrona, ny firafitry ny fitaovana ary ny geometry an'ny ampahany dia misy fiatraikany amin'ny fandeferana.
Ny tombony amin'ny famokarana betsaka
Miaraka amin'ny maherin'ny 500 haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha avo lenta, fitaovana famolavolana lasantsy manerantany, 10+ taona niainana fanamboarana bobongolo, azonay omena anao ny serivisy manerantany toa ny famokarana bobongolo haingana sy ny famokarana betsaka hamolavola hahatratra ny fahombiazan'ny famokarana tsara indrindra ary hampihena ny vidin'ny famokarana amin'ny fomba mahomby, manome vahaolana feno hamokatra haingana.
Dingana famokarana betsaka
fanaovana bobongolo, famolavolana tsindrona famokarana betsaka
Taorian'ny famahana ny olana amin'ny fanaovana lasitra dia nanomboka nanao lasitra izahay. Ny akora fototra bobongolo dia vita amin'ny fitsaboana S136 + hafanana, ny hamafin'ny trano dia mety hahatratra 48-52 degre, mampiasa 50C ho an'ny lasitra bobongolo isika, amin'ny alàlan'ny milina fanodinana / fandavahana lavaka lalina, fikotranan'i CNC, fitsaboana hafanana, milina fikosoham-bary, antsy jiro CNC, tariby fanapahana, jiro elektrika, poloney, fizotran'ny famolavolana bobongolo mba hampandeha tsara ny bobongolo, farany ataovy ny tsindrona.
Ny ankamaroan'ny loko ao amin'ny boky kaody Pantone dia misy ho an'ny ampahany miendrika tsindrona ary ampiasainay izany
boky ho toy ny fenitra volamena ho an'ny loko mifanaraka. Pigment, Master Batch ary Pre-color no
fomba telo ankapobeny amin'ny fampifanarahana loko amin'ny sehatry ny tsindrona.
Zahao ireo fahasamihafana misy amin'ireo fomba telo ireo.
Manolotra andiana serivisy famaranana aorinan'ny faritra atsindrona izahay: hosodoko, fanodinana herinaratra, fanontana, fanontana mafana
Ny famolahana tsindrona dia iray amin'ireo serivisy ifotoranay ary ny orinasanay dia nandroso fampitaovana fanolorana tsindrona izay afaka manome anao serivisy fampidirana haingana haingana indrindra. Azafady mba mifandraisa aminay info@xmhsr.com raha mila fanazavana fanampiny.
Tsy vitan'ny manolotra serivisy fampitaovana haingam-pandeha ho haingana fa koa serivisy famolavolana famokarana ho 1 tapitrisa.
Address: No.260 Tong'an Yuan, Faritra Indostrialy Tong'an, Xiamencity, 361100, Fujian, Sina